चाइना र बङ्गालको स्याण्डवीच हुनुको निम्ति सिक्किम भारतमा गाभेको होइनः मुख्यमन्त्री चामलिङ – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsचाइना र बङ्गालको स्याण्डवीच हुनुको निम्ति सिक्किम भारतमा गाभेको होइनः मुख्यमन्त्री चामलिङ
गान्तोकः सिक्किमको वाहन तोडफोड र सिक्किमलाई चेपारोमा पार्ने पश्चिम बङ्गाल सरकारको षडयन्त्रमाथि मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले गतिलो प्रहार गर्दै भारत सरकारलाई यसको जवाफ मागेका छन्।
दक्षिण सिक्किमको चिसोपानीमा आयोजित एउटा शिलान्यास कार्यक्रमको विराट जनभेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले धैर्यताको बाँध फुटेपछि सिलगढीमा बङ्गाल सरकारले सिक्किममाथि सिर्जना गरेको दबाउलाई जवाफ दिन सर्वोच्च न्यायालयबाट कार्वाही गर्ने निर्णय लिएको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले बताएका छन्।
‘ अहिले सिलगढीमा हाम्रो गाडीहरूलाई दुःख दिँदैछ, हाम्रो सामानहरू आउन दिएको छैन। तपाईहरूले हेर्नुहोस् धानखाने मुसा चोट पाउने भ्यागुता जस्तो हामीलाई दुःख आइलागेको छ। भारत सरकारसित म कन्ट्याकमा छु। मैले सुप्रिम कोर्टमा पनि जाने सोचेको छु, इण्डियन फेडरल सिस्टमभित्र भारतको 22 औं राज्य हौं। सिक्किमलाई गाभेर देशभक्ति देखाएको हो चाइना र बङ्गालको स्याण्डवीच हुनुको निम्ति सिक्किम भारतमा गाभेको होइन,’ उनले जन भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘नाथुला बोर्डरमा पनि अशान्ति छ। तलबाट चामलै आउन नदिने, पेट्रोल आउन नदिने भन्दै चेप्टाइ राखेको छ। यो के हो? हामी इण्डियन होइन? भारतीय होइन? हाम्रो देशमा भारतीय भएर बाँच्ने हक छैन ? सिक्किमे जनताले बुझ्नु सिक्किमे विद्यार्थीले बुझ्नु, 23-24 वर्षदेखि सिक्किमलाई शान्ति सुरक्षा दिएर राखेका छौं। देशभक्ति गरेको छौं। चारधाम, गुरु रिम्पोछे र बुद्धपार्क बनाइ बनाइ, देशभक्ति गरेका छौं। मन्दिर र चर्च बनाई बनाई देशभक्ति गरेका छौं, त्यहाँदेखि हामीले के गर्नु?’
उनले बोर्डरमा बिना तलबको सिपाही जस्तो सिक्किमले देशको रक्षा गरेर बसेको भन्दै भारत सरकारलाई केन्द्र गर्दै भने, ‘हाम्रो कति ठूलो योगदान छ, तपाईहरूले बुझ्नुहोस्। हिमालयन रेञ्जर्समा बङ्गाललाई पानी दिदैछौं। बङ्गाल, बिहार र उडिसालाई पानी दिदैछौं। वाटर रिजर्ब सिक्किम हो, यसको बदलीमा हामीलाई बाटो थुन्नु। हामीलाई तीस वर्ष भयो बाटो थुनेको। 30 वर्ष भयो हाम्रो गाडी तोडेको छ। तीस वर्ष हामीलाई ढुङ्गा हानेको छ। तीस वर्षदेखि डराई डराई सिलगढी जानुपरेको छ। शान्ति के हो सुरक्षा के हो बुझ्नु, 23 वर्ष सिक्किममा शान्ति र सुरक्षा दिएको छ। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले होटेल सुकेको छ गाडी ग्यारेजमा थन्केको छ। तपाई चिन्ता नगर्नुहोस्, चामल कहाँबाट ल्याउनुपर्छ तपाईहरूलाई हामी भोकै राख्दैनौं। भारतसंग कुरा गर्दैछौं।’
कालेबुङमा प्रशासनको वर्बरताः गणतन्त्रको हत्याः अब गोर्खाल्याण्डसम्म पुगेर मात्र बिसाउँछु-विमल